Ahoana ny fomba hahazoana Adobe Photoshop 7.0 maimaim-poana sy ara-dalàna
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Photoshop 7.0 Download maimaim-poana
Photoshop 7.0 Download maimaim-poana
By Ann Young, Mathis Ravatomanga 2022-05-12, Malagasy Blog
Raha manontany tena ianao hoe aiza sy ahoana no hahitana rohy download maimaim-poana Photoshop 7.0, ny lahatsoratra dia hanampy anao amin'izany. Ary koa, hiresaka momba ny safidy malalaka maro amin'ny Photoshop 7.0 aho ary hanome valiny amin'ireo fanontaniana apetraka matetika momba ny Photoshop.
Tombontsoa amin'ny Photoshop 7.0
Mampihena ny vovoka, ny scratches, ny tasy ary ny ketrona amin'ny sary
Mangarahara amin'ny Internet - manova ny mangarahara mba hanatsarana ny mangarahara amin'ny sary an-tranonkala
Mitazona ny fahazavan'ny sary sy soratra véctor
Fanohanana lahatsoratra - ampiasao ny fanamarinana tsipelina miaraka amin'ny fikarohana sy fanoloana
OS inona no mifanaraka amin'ny Photoshop 7.0?
Photoshop 7.0 dia miasa amin'ny Windows 10 x64 nefa tsy mampiasa maodely mifanentana. Ny hany olana lehibe dia ny hoe mila manana toerana malalaka 1TB na latsaky ny kapila mafy ianao. Raha tsy izany dia tsy mandeha mihitsy ny Photoshop 7.0.
Ohatrinona ny vidin'ny version Photoshop feno?
Tsy tohanan'ny Adobe intsony ny Photoshop 7.0. Saingy azonao atao ny misintona Adobe Photoshop 23.1 (dikan-teny farany) amin'ny .99 isam-bolana. Rehefa avy nividy ny programa ianao dia ho afaka mampiasa ny fiasa rehetra ary mahazo fanavaozana.
JEREO NY TOROTRA MANOKANA
Miasa tsara amin'ny macOS sy Windows ve ny fitsarana maimaim-poana?
Ny andrana maimaim-poana Adobe Photoshop 7.0 dia miasa tsara amin'ny Windows 10 (64-Bit) na Windows 7 (64-Bit), ary koa amin'ny macOS 10.15, 10.14 na OS 10.13.
Azo atao ve ny misintona Photoshop 7.0 trial version amin'ny tranokala ofisialy?
Tsia. Koa satria tsy tohanan'ny Adobe intsony ity dikan-teny ity, dia tsy afaka misintona na kinova feno na andrana ianao.
Inona no tombony azo amin'ny fampiasana ny version 7.0?
Ny iray amin'ireo tombony lehibe dia ny ahafahanao manao fiovana kely amin'ny tifitra. Azonao atao ny manova ny lokon'ny hoditra, mamorona dika mitovy amin'ny sary amin'ny vahaolana avo lenta, manitsy ny famirapiratana, sns.
Dikan-tsarimihetsika Photoshop 7.0
Amin'izao fotoana izao, ny Photoshop 7.0 dia heverina ho dikan-teny lany andro amin'ny programa, satria navoaka 18 taona lasa izay, ary tsy afaka misintona azy amin'ny tranokala ofisialy intsony ianao. Noho izany dia mihasarotra ny mahita ny dikan-teny ofisialy.
Amin'izao fotoana izao, misy tranonkala piraty marobe izay manolotra rohy ofisialy amin'ny download Photoshop 7.0 ho an'ny PC. Saingy tokony ho fantatrao fa ny fampidinana rindrambaiko avy amin'ny tranokala toy izany dia hitondra voka-dratsy maromaro. Mety ho voan'ny viriosy amin'ny solosainao ianao ary manokatra ny fidirana amin'ny angona manokana sy ny tenimiafinao. Noho izany, ho an'ny asa azo itokisana sy kalitao, manoro hevitra anao aho hampiasa ny kinova nahazoan-dàlana amin'ity programa ity ary misintona azy amin'ny pejy Adobe ofisialy.
Mety hahazo programa miaraka amin'ny fianjerana
Miasa amin'ny kinova Photoshop 7.0 pirated, tsy afaka misoroka ny fianjerana ianao. Mandritra ny fampandehanana dia mety hianjera ny programa ary miadana be ny hetsika ataonao. Aza hadino koa fa raha mampiasa Photoshop 7.0 voajirika ianao dia handalo anao ny fanavaozana.
Loza amin'ny otrikaretina
Raha mametraka Adobe Photoshop 7.0 avy amin'ny torrents ianao, dia mety ho voan'ny viriosy sy programa ratsy isan-karazany ny solosainao. Ny viriosy sy programa toy izany dia mety hitondra voka-dratsy ary sarotra ny manala azy ireo. Ny fiasana amin'ny programa dia ho lasa olana ary hahatonga ny solosaina hivaingana. Atahorana hanimba rakitra manan-danja amin'ny viriosy miditra ao amin'ny solosainao ihany koa ianao rehefa avy misintona sy mametraka programa voajirika.
Fanitsakitsahana ny Lalàna
Rehefa misintona Photoshop ho an'ny PC amin'ny tranokala piraty ianao dia tsy mahazo viriosy fotsiny fa mandika ny lalàna momba ny zon'ny mpamorona. Noho izany, mety hahazo onitra ara-bola ianao na hotsaraina.
Free Photoshop 7.0 Alternatives
Raha tsy afaka misintona Photoshop 7.0 maimaim-poana ianao noho ny antony sasany, dia manoro hevitra anao aho mba handinika ireo safidy hafa aseho etsy ambany.
AMPIASAO PIXLR MAIMAIMPOANA
Ny interface sy ny fitaovana dia mitovy amin'ny Photoshop
Fanohanana saron-tava sy sosona
Betsaka ny fitaovana mahomby
Betsaka ny doka
Ny 45% amin'ny fampiasa dia voafetra amin'ny dikan-teny maimaim-poana
Pixlr dia iray amin'ireo fampiharana miorina amin'ny tranonkala tsara indrindra ary safidy mendrika amin'ny fampidinana Photoshop maimaim-poana. Raha tsy mampaninona anao ny tsy fisian'ny Ps plug-in dia ity fampiharana ity no ilainao. Rehefa nampiakatra sary ianao dia afaka mampiasa sosona, hajia klone, saron-tava, fitaovana mifantina, hanatsarana azy.
AMPIASAO PHOTOSCAPE MAIMAIMPOANA
Fanohanana ny endrika RAW
Fitaovana fanitsiana sary matihanina
Fidirana amin'ny sary nomerika sy fanitsiana loko
Ny ankamaroan'ny fiasa dia voafetra amin'ny fidirana malalaka
PhotoScape dia safidy tsara amin'ny Photoshop 7.0 download maimaim-poana ho an'ireo mpampiasa za-draharaha sy vaovao. Izy io dia ahafahan'ny mpampiasa mamorona tetikasa famolavolana, manova sary, manova ny rakitra RAW, sns. Ankoatra izany, ny programa dia misy tabilao roa misaraka ho an'ny famokarana sary, miasa miaraka amin'ny rakitra video sy GIF.
AMPIASAO GIMP MAIMAIMPOANA
Azo ampiasaina amin'ny Linux
Fitaovana pro ho an'ny fanamboarana sary
Maska, sosona ary vokany
Ny fahombiazany dia ratsy noho ny an'ny analogues
GIMP dia tonian-dahatsoratry ny sary open-source feno ary safidy tsara indrindra amin'ny Adobe Photoshop. Manana fitaovana maro ho an'ny retouching sary, fanatsarana ny hazavana, miasa amin'ny sosona, saron-tava, sns.
AMPIASAO INKSCAPE MAIMAIMPOANA
Fitaovana miavaka ho an'ny sary vetaveta
Mety amin'ny PC malemy
Manohana endrika RAW
Tsy natao ho an'ny fanitsiana sary matihanina
Saron-tava sy sosona tsy novolavolaina
Inkscape dia programa mahomby amin'ny famoronana sary ara-javakanto sy ara-teknika. Ny fitaovana dia ahafahan'ny mpampiasa mamerina ny tifitra, mamokatra logo na sora-baventy ary mampiasa borosy samihafa. Ity safidy Photoshop 7.0 ity dia mety amin'ny fanaovana asa sary vetaveta ihany koa.
AMPIASAO BEFUNKY MAIMAIMPOANA
Fitaovan'ny fanovana sary
Fanohanana ny rakitra RAW
Fifantenana betsaka amin'ny effet sy ny haingon-trano
BeFunky dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra amin'ny fampidinana Photoshop 7.0. Manolotra vokatra be dia be ho an'ny mpampiasa, haingon-trano ary fanovana mandroso ho an'ny famokarana sary izy io. Ho fanampin'ny fanitsiana ny loko sy ny fanesorana zavatra kely, ny programa dia manana tabilao misaraka amin'ny famoronana collage sy endrika sary.
Ho an'ny asa mora amin'ny Photoshop 7.0, manoro hevitra aho ny hampiasa ireo hetsika omena etsy ambany. Amin'izany fomba izany dia hahatonga ny famoronanao ho miavaka sy tsara tarehy kokoa ianao.
Ampidino maimaim-poana ny Photoshop 7.0
Misintona Photoshop 7.0 maimaim-poana ho an'ny Mac/Win/Linux
Azo atao ny maka Photoshop 7.0 maimaim-poana hijerena ny fahaiza-manao rehetra sy ny endri-javatra miavaka amin'ny programa. Azonao atao ihany koa ny mianatra mamorona tetikasa mahaliana anao manokana.
Photoshop CS2 maimaim-poana
Adobe Creative Cloud MAIMAIMPOANA
Adobe Photoshop Download maimaim-poana ho an'ny Windows 10
Adobe Stock Maimaim-Poana
Maimaimpoana ny Adobe Animate
Ahoana Ny Fomba Ahazoana Photoshop CS5 Maimaim-Poana & Ara-Dalàna